Qaar ka mid ah Musharaxiin u taagan Xilka Madaxweynaha Galmudug oo Isbaheysi sameestay. – Kismaayo24 News Agency
Qaar ka mid ah Musharaxiin u taagan Xilka Madaxweynaha Galmudug oo Isbaheysi sameestay.
by admin 16th January 2020 0165
Sadex kamid ah musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha maamulka Galmudug oo galabta Warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusomareeb ee xarunta Galmudug ayaa shaaciyay in ay sameesteen isbaheysi.
Musharaxiinta isbaheysiga siyaasadeed kaga dhawaaqay magaalasa Dhuusomareeb ayaa kala ah C/raxmaan Odawaa , Kamaal Dahir Guutaale iyo C/llaahi Faarax Wehliye oo ah Wasiiru Dowladaha Wasaarada arimaha gudaha iyo federaalka.
Labo kamid ah Musharaxiinta isbaheysiga ku dhawaaqay ayaa katirsan Xisbiyada Mucaarada ee UDP iyo Xisbiga Wadajir halka Musharaxa sadexaadna uu katirsanaa xukuumada Nabad iyo nolol.
Sida aan wararka ku helnay Musharaxiinta isbaheysiga sameestay ayaa ku heshiiyay in doorashada musharaxii ugu cod bataa ugu shubaan, waxa ayna Musharaxiinta dadaal ku bixinayaan in doorashada midkood uu ku guuleesto.
Doorashada Madaxweynaha Galmudug ayaa ah mid xiiso gaar ah leh, waxaana doorashadan ku tartamaya Siyaasiyiin muxaafid ah iyo kuwa mucaarad ah, waxaana la saadaalinayaa in ay guuleesan doonaan Musharaxiinta muxaafidka ah.
Xildhibanada Maamulka Galmudug oo loodiiday kaararka aqoonsiga .
Tirada shacabka ay dileen Al-Shabaab tobankii sano ee tagay oo la shaaciyey.
Akhriso: Dowladda soomalia oo hanjabaad kulul u dirtay jamaacadda al-saadicuun bil-xaq.(الصادعون بالحق )
Tifaftiraha K24 20th April 2017
Dhageyso: Culimada Somalia oo war cad ka soo saaray Fikirka koox diimeedka Al-saadicuuna bil-xaq
admin 11th April 2017 11th April 2017
TOP NEWS: Abaarta ka jirta Deegaanada Soomaaliland iyo Puntland oo ka sii dareysa iyo hey’addaha gargaarka oo…
admin 30th April 2016